Sida loo weydiiyo su'aalaha sheekooyinka Instagram: waxa ku cusub barta Instagram | Androidsis
Manuel Ramirez | | Codsiyada Android, Noticias, Tababarada
Waxaan wajaheynaa mid kale oo ka mid ah wararkaas muhiimka ah ee 'Instagram' markii aan soo bandhignay istiikarada si aad su'aalo ugu weydiiso Sheekooyinka Instagram. App ah oo noqdey kan ugu jecel malaayiin isticmaale oo bixiya shebekad nadiif ah oo diiradda saaraya khibrada isticmaale ee ka fog Facebook lafteeda.
Markan, sida munaasabadaha kale, Instagram ayaa si rasmi ah uga dhigtay imaatinka su'aalaha istiikarada ah ee Sheekooyinka. Taasi waa, waxaad weydiin kartaa su'aalo xiriiradaada iyo kuwa raacsan si aad u hesho jawaab celin ama aad si fudud ugu ogaato aragtidooda mowduuc gaar ah.
1 Instagram waxay ku dareysaa mid kale oo ka mid ah waraaqaha xiisaha leh
2 Sida loo weydiiyo su'aalaha sheekooyinka Instagram
Instagram waxay ku dareysaa mid kale oo ka mid ah waraaqaha xiisaha leh
Calaamadaha Instagram-ka ayaa noo oggolaanaya inaan marinno howlo cusub si aan u siinno khibrad kale kuwa raacsan kuwa raaca mid kasta oo iyaga ka mid ah. Sheekooyinka Instagram waxay noqdeen kacaan dhameystiran shabakada bulshaduna sifiican ayey u taqaanaa, sidaa darteed dhowrkii maalmoodba mar ayey war keeneysaa.
Markan waa su'aalaha ku saabsan Sheekooyinka Instagram kuwa qaada dhammaan doorka hoggaamineed ee shabakad in heerkulkan khafiifka ahi uu qaato doorka hoggaaminta oo dhan. Wax yar uun ka dib kulanka barnaamijka cusub ee Instagram ee loo yaqaan IGTV taasina waxay noo ogolaaneysaa inaan fiidiyowyo muddo-dheer ah ku soo dhigno shabakadda bulshada.
Mana aha, Iyagu ma ahan istiikarada sahaminta ama waraaqaha emojis, taas oo noo ogolaaneysa inaan su'aalo weydiino. Halkan su'aalaha waa kuwo furan, oo u horseedaya shaqadan cusub jihooyinka kale, oo ay si fiican u sugayaan inbadan oo ka mid ah shabakadaha bulshada ee shilalka noocan oo kale ah nolosheena.
Waxaan ula jeedaa, waa maxay waxaan ka hadleynaa su'aalaha furan jawaabaha qaar oo ay ku dheeraan karaan kuwa raacsan ama xiriirada aan leenahay. Tani waxay ka duwan tahay labada istiikir ee kor lagu soo sheegay, waxayna u furaysaa adduunyo dhan oo fursado shabakadda bulshada ee 'Instagram'.
Sida loo weydiiyo su'aalaha sheekooyinka Instagram
Mid kale oo ka mid ah wanaagga su'aasha ayaa ah inaan yeelan doonno kartida wadaagga su'aasha iyo waliba jawaabta sheeko cusub oo Instagram ah. Marka waxyaabaha ay su'aasheennu abuuri karaan, waxay noqon karaan sheeko kale oo 'Instagram Story' ah iyo wixii la mid ah ad infinitum. Shabakada bulshada waxay si fiican u yaqaanaan wax walba oo malaayiin taageerayaal ah oo ay ku leedahay meeraha oo dhan sida; hadda waxaa jira in ka badan 400 milyan oo isticmaaleyaal ah oo isticmaala maalin kasta.
Tan koowaad waa abuur mid ka mid ah sheekooyinka 'Instagram'.
Waxaan ku haynaa istiikarada dusha sare oo leh astaamaha wejiga dhoolla cadeynaya. Waan ku riixnaa.
Waxaan riixnaa ku saabsan istiikarka su'aalaha.
Hadda waa inaan weydiisanno oo keliya su'aasha oo aan dhigno meel kasta oo aan ka doonno sheekadeenna Instagram.
Xilliga lasocodka ama xiriirka sheekooyinkaaga Instagram ay furayaan, waxaad arki doontaa dhejiska la riixi karo si looga jawaabo. Ma jiro xad xaddidan, taas oo macnaheedu yahay in isticmaaleyaashu ay awoodi doonaan inay ka jawaabaan hal mar ka dib iyada oo aan wax dhibaato ah.
Iyo kuwa ku bilaabay su'aasha sheekooyinka Instagram, fadlan eeg jawaabaha liiska daawadayaasha. Guji mid kasta oo ka mid ah jawaabaha si aad u awoodo inaad abuurto, haddii aad rabto, sheeko cusub oo Instagram ah taas ayaa la soo muuqan doona iyada oo su'aasha ah maxaad ka jawaabaysaa. Sidan oo kale, waxa ku jira ayaa loo soo saari doonaa si isdaba-joog ah illaa qof uu joojiyo inuu sameeyo.
Mid ka mid ah faahfaahinta lagu xisaabtamayo astaamahan su'aalaha lagu weydiinayo Sheekooyinka Instagram waa taas, halka waxaad awoodi doontaa inaad aragto isticmaalaha sameeyey jawaab kasta Liiska daawadayaashaada, markaad la wadaagto jawaabtaas sheekadaada, sawirka iyo magaca isticmaale ee xiriirkaaga lama muujin doono.
Marka waad ogtahay horay sida loo weydiiyo su'aalaha sheekooyinka Instagram sida mid ka mid ah wararka ugu muhiimsan ee shabakada bulshada bilihii la soo dhaafay. Dhanka kale, waxaad ka heleysaa nooca 52 ee Android, haddaba si fiican u fiiri Google Play Store ama aad u degsato APK-ka hoose.
Soodejiso Instagram APK.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sida loo weyddiiyo su'aalaha sheekooyinka 'Instagram': cibaaro weyn oo Instagram ah
Cusbooneysiinta ugu dambeysa ee Netflix waxay noo oggolaaneysaa inaan si toos ah u soo dejino waxyaabaha